जुन संस्था विधिवत छैन, यस्तो झुण्ड हो– सरकारले चिन्दैन : प्रधानमंत्री ओली ! - PUBLICAAWAJ
जुन संस्था विधिवत छैन, यस्तो झुण्ड हो– सरकारले चिन्दैन : प्रधानमंत्री ओली !
प्रकाशित : आइतबार, चैत ०३, २०७५१२:२८ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
काठमाडौँ, हाल नेपालमा देखिएको अस्थिर राजनीतिले जो कोहीलाई निराश बनाएको छ । नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको ‘वीप्लब’ समूह माथि लगाइएको प्रतिबन्धले पार्टी भित्र भित्रै पनि मनमुटावको समस्या आइरहेको देख्न सकिन्छ ।
आफू र आफ्नो निर्णय माथि भइरहेको आलोचना बारे प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओलीले बल्ल मुख खोलेका छन् । आफ्नो निर्णय कतै प नि गलत नभएको दावी गर्दै उनले ‘विप्लब’ कुनै पनि पार्टी नभएको हुँदा आफुले संबिधान विपरित कुनै कार्य नगरेको बताएका छन् ।
विराटनगर विमानस्थलमा आज पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लब समूह कुनै पनि कार्यालयमा दर्ता नभएको हुँदा यो कुनै राजनीतिक दल नभएको उल्लेख गर्दै उक्त समूहको विध्वंसात्मक क्रियाकलाप माथि प्रतिबन्ध लगाइएको बताएका छन् ।
उनि भन्छन्, ‘ जुन संस्था विधिवत छैन, यस्तो झुण्ड हो– सरकारले चिन्दैन । ‘ त्यसैले नेताहरुलाई उक्त समूह बारे आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्दा सचेत हुन उनले आग्रह गर्दै उनि भन्छन्, ‘ नेपालका नेताजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आफैंले जवाफ दिन नसक्ने कुराहरू नगर्नुहोस्, उनको पार्टी कही दर्ता भएको थियो र ? दर्ता छैन। नेकपा विप्लव समूह भनेर चिनिने झुण्ड कहिले कोब्रा समूह भनेर चिनिने, कहिले के भनेर चिनिने जस्तै हो । ‘
विप्लब समूह माथिको आक्रोश पोख्दै उनले भने, ‘ बम पड्काएर उद्यमी, व्यवसायी, जनप्रतिनिधिलाई धम्क्याउने। बम पड्काइरहेको छ, धम्क्याइरहेको छ, अनि यस्तो गर्न पाइँदैन भन्दा रुवाबासी ? गम्भीर राजनीति गर्नुपर्छ। ‘
उनले संबिधान र कानुन विपरित लुटपाट र आतंकका गतिविधि गर्न नपाइने बताए । साथै मंत्रीपरिषद पुनर्गठन बारे बोल्दै उनले भने, ‘ एउटा मन्त्रालय खाली छ, अपूर्णलाई पूर्ण गर्ने हो, पुनर्गठन हुँदैन । ‘
नेपालमा शासकहरुमा दृष्टिकोण नै ठिक भएन : प्रधानमन्त्री ओली !
ओली-नेपालका आ–आफ्नै दाउ !
प्रधानमन्त्रीले झूट बोलेको खुलासा , जसले सरकारलाई गलायो (चिठीसहित)
केपी ओलीका बिश्वास पात्र प्रेम आलेले शेरबहादुरलाई हाले भोट